IINDLEKO ZOMGANGATHO WOKHUNI (I-INJINI KUNYE NEHOLD HARDWOOD) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Iindleko zoMgangatho wokhuni (i-Injini kunye neHold Hardwood)
Umthi okhuni lukhetho lokuqala kuninzi lwabanini bamakhaya xa kufikwa kumgangatho wamakhaya. Olu hlobo lophahla luyaziwa ngokufudumala kunye nokubukeka kweklasikhi, ukungafani, kunye nokuqina.
Iindleko zomgangatho wokhuni ngeenyawo zenyawo nganye
Ixabiso lomgangatho wemithi
Iindleko zokwakha iinkuni zobunjineli
Iindleko zoMgangatho oLukhuni ngeentlobo
Iindleko zoMgangatho weeNkuni ziiNdidi
Ixabiso elongezelelweyo lomgangatho weenkuni
Ukusukela ngo-2020 ixabiso eliphakathi lomgangatho wokhuni kubandakanya ufakelo lumalunga ne- $ 4 ukuya kwi- $ 10 ngeenyawo zenyawo nganye.
Eli xabiso lingahluka ngokuxhomekeka kwizinto ezinje ngesikwere sendawo leyo, kunye nohlobo lomthi okhethiweyo. Apha ngezantsi uyakufumana ezinye zezinto eziphambili ekufuneka uzithathele ingqalelo xa uthenga umthi weplanga kwikhaya lakho.
Oku kubandakanya indleko zonyawo lwesikweri lwezixhobo ezisetyenziswayo kunye neendleko zonyawo ngalunye lofakelo. Oku kunokuhlelwa ngokwamanqanaba amaxabiso amathathu ahlukeneyo kwixabiso lawo eliphakathi kwiinyawo zesikwere ngasinye kumgangatho.
Xa ukhetha uhlobo lweplanga yempahla yomthi kubalulekile ukuqaphela isitayile seplanga, kunye nolwahlulo lwayo, nokuba ngumthi oqinileyo okanye wenziwe ngomthi.
Oku kuhlala kuza kwiibhodi ezimxinwa ezinobubanzi obuziisentimitha ezintathu okanye ngaphantsi. Inokuza kwakhona kwiiplanga ezilinganisa ii-intshi ezisixhenxe okanye nangaphezulu. Ixabiso layo lixhomekeke kuhlobo olukhethiweyo lomthi oza kulusebenzisa.
- Phantsi : isebenzisa imithi ethambileyo njengepayini edla ngokubiza i-3- $ 6 ngenyawo ngalinye lesikwere kunye nokufakelwa kubiza i- $ 3- $ 5 ngonyawo wesikwere.
-Phakathi : oku kwenza ukusetyenziswa kweentlobo eziphakathi ezinje nge-teak, i-oki, kunye ne-American cherry ebiza malunga ne- $ 5- $ 10 ngonyawo wesikwere kwizixhobo kunye ne- $ 4- $ 8 ngenyawo ngalinye lesikwere kufakelo.
-Phezulu : yenza ukusetyenziswa kweeplanga ezibiza kakhulu ezenziwe ngemithi engaqhelekanga njenge-walnut yaseBrazil, i-mahogany, i-tigerwood kunye ne-cypress. Iindleko zezixhobo zihlala zi- $ 8- $ 14 ngenyawo nganye yesikwere kwaye kufakelo yi- $ 4- $ 8 ngenyawo ngalinye lesikwere.
Lo mgangatho uqukethe i-veneer yangempela yeenkuni edibeneyo kwiindawo ezininzi zokuxhaswa kweenkuni ezingabizi njengemithi eqinile.
- Phantsi : Isiseko somthi onzima senziwe ngamacandelwana amathathu asisiseko afakwe umaleko wokhuni oluqinileyo kunye nobukhulu be-1/16-intshi ukuya kwi-1/12-intshi ubukhulu. Ixabiso li- $ 3- $ 5 ngenyawo ngalinye lesikwere kunye nokufakwa kwayo kubiza i- $ 3- $ 10 ngeenyawo zenyawo.
-Phakathi : ihlala ine-veneer eshinyeneyo enesiseko sesihlanu somaleko esixabisa i-5- $ 10 ngofakelo lubiza i- $ 3- $ 10 ngenyawo ngalinye lesikwere.
-Phezulu : Inamaleko asixhenxe okanye nangaphezulu kwaye ine-veneer ephezulu yokulinganisa i-1/6-ubukhulu. Iindleko zimalunga ne- $ 8- $ 13 ngonyawo wesikwere kunye nokufakwa kwayo kwinqanaba lesikwere libiza i- $ 8- $ 13.
Intlawulo yokufaka ixhomekeke kwizinto ezahlukeneyo ezibandakanya indawo yendlu yakho kunye nobunzima beprojekthi. Iindleko ezongeziweyo ziya kuvela ukuba kusasuswa kufakwe ifanitshala endaweni yayo, kulungiswa umhlaba ophantsi, kususwe okanye kulahlwe umgangatho omdala.
Oku kungabiza kakhulu xa kuthelekiswa neprojekthi apho isifakeli kuya kufuneka senze ufakelo kuphela kwaye akukho enye into. Kukho abanye abafaki abahlawulisa malunga neesenti ezingamashumi amabini kunyawo ngalunye lwesikwere ukususwa kwekhaphethi okanye ukuhambisa ifanitshala. Abanye abafaki baya kuhlawulisa isixhobo simahla njengoko behambisa izixhobo.
Umgangatho wokhuni oluqinileyo uvela kwiintlobo ezahlukeneyo zemithi kwaye udidi ngalunye lunombala ohlukileyo, ixabiso kunye nokuqina njengoko kubhalwe apha ngezantsi:
Imephu - inzima kakhulu kwaye iyamelana neentsimbi. Umbala wayo ubonakala umhlophe ococekileyo ukuba ubomvu obomvu kwaye uza kuxabisa i-3.50 ukuya kwi-6 yeedola ngonyawo wesikwere.
I-Hickory-ineentlobo ezahlukileyo zemibala eneepateni zokutya okuziinkozo. Inobunzima obunzima obuhambelana kakuhle kwiindawo ezigcwele abantu. Iindleko zayo malunga ne-3 ukuya kwi-6 zeedola kwinqanaba ngalinye lesikwere
I-bamboo -inokukhula okunomdla kokuqhekeka okunemibala eyahlukeneyo. Ezona zinzima kunye nezomeleleyo zingumtya nokwadala uqalo . Iindleko zoku yi- $ 2 ukuya kwi-4 yeedola kwisikwere ngasinye.
I-oki ebomvu - ibonakala ibomvu kwaye iqine ngengqolowa ebonakalayo. Ihlala ixesha elide kwaye uninzi lwezi zinto zikhanya ekukhanyeni zenza imeko efudumeleyo. Iidola ezi-2 ukuya kwezi-6 ngeenyawo zenyawo nganye ziindleko zayo.
I-Pine-ukubonakala kwayo ziipatheni ze-rustic knot kunye neetoni ezifudumeleyo ezivela kwi-beige ekhanyayo ukuya kwi-amber yegolide etyebileyo. Inobungozi bokukrwela kunye neentsimbi kwaye ixabisa i-1.50 ukuya kwi-4 yeedola ngenyawo ngalinye lesikwere.
Umlotha omhlophe- lo unombala ococekileyo oqala kwitan ethambileyo kunye nokhanyayo ukuya kwingwevu emthubi enamaqhina abonakalayo. Olu hlobo luzinzileyo kwaye kunzima ukuba ibala. Iindleko ziyi- $ 5 ukuya kwi-6 ngeenyawo zenyawo.
I-walnut yaseBrazil-lo ngumthi onzima ongaqhelekanga ohluka ngee-shades ezimdaka. Kunzima kakhulu kwaye kuzinzile ngokuchasene nokukrwela kwezilwanyana zasekhaya. Iindleko zimalunga ne- $ 5 ukuya kwi-9 yeedola ngenyawo ngalinye lesikwere.
Imigangatho yokhuni olunobunjineli inyuse ukunganyamezeli xa kuthelekiswa nomthi oqinileyo. Le yimigangatho yomthi engcono xa kuthelekiswa nemithi elukhuni yemveli kwabo banezilwanyana ezifuywayo okanye abantwana abathanda ukuchitheka. Umgangatho onzima womgangatho ekhitshini kunye nobubi okanye Umgangatho onzima wobunjineli ekhitshini apha ngolwazi oluthe kratya.
Olona khetho lwaziweyo lubunjwe apha ngezantsi lubhalwe apha ngezantsi:
Imephu - imibala iyahluka ukusuka kumbala omhlophe ococekileyo ukuya kobomvu ocebileyo. Oku kunokukhawuleziswa okanye kunamathele kubiza i-10 ukuya kwi-11 yeedola ngeenyawo zenyawo.
Uthuthu olumhlophe - luza ngemibala eyahlukeneyo kunye neepateni zokutya okuziinkozo okunika umlinganiswa onomdla kumgangatho ngelixa ufihla ukungafezeki kakuhle. Iindleko zoku yi- $ 12 ukuya kwi-13 yeedola kwisikwere ngasinye.
Iipiney yentliziyo-inamakhubalo eediliya ngenxa yegawuthi yayo, imingxunya yezikhonkwane, kunye namaqhina anomtsalane. Iidola ezili-10 ukuya kwezingama-11 ngeenyawo zesikwere iindleko zayo.
I-cherry yaseBrazil - ngumthi ongaqhelekanga onethoni ebomvu-emdaka ngombala kunye nee-hues ezityebileyo ezibiza malunga ne-3 ukuya kwi-6 yeedola ngonyawo wesikwere.
I-Acacia-icwangcisa umahluko okhangayo wemibala emdaka ephakathi. Ukuhlwaywa kwayo kuyenza yaziwe ukuba isetyenziswe ngenxa yokubonakala kwayo kwe-rustic kunye ne-Colonial. Iindleko zayo zimalunga ne- $ 4 ukuya kwi-5 yeedola ngenyawo ngalinye lesikwere.
I-koa yaseBrazil - umbala wayo wahlukile o-orenji onemigca esityebileyo kunye nebala limnyama. Iprosesa ukujonga ngokungqindilili okuya kuthi kubize i-5 ukuya kwi-7 yeedola ngenyawo ngalinye lesikwere.
Kulindeleke ukuba uchithe ngaphezulu kwezi zinto zimbini kunye nasemsebenzini ukuba kukho umsebenzi ekufuneka wenziwe ngokudibanisa izinto, i-subfloor, okanye ezinye izinto zolwakhiwo. I-plywood okanye i-subflooring iya kuba neendleko eziphakathi kwe- $ 22 kuwo onke ama-4- by 8-foot sheet. Igumbi le-12- ngeenyawo ezili-12 liza kufuna amaphepha amahlanu eplywood anokuba neendleko ezonyukayo ze- $ 110.
Abachweli bahlawulisa ukufakelwa kwemigangatho engaphantsi yomgangatho omtsha kunye nokudityaniswa kwezinga elingangeedola ezingama-30 ukuya kuthi ga kwiidola ezili-100 ngeyure nganye yomsebenzi.
(Ndwendwela igalari yethu iintlobo zomthi okhuni Ngolwazi oluthe kratya malunga neentlobo zemithi ezithandwayo ezinokusetyenziswa kuyilo lwangaphakathi)
Ngubani owayengumfazi wokuqala ka-donald trump
monique lhuillier iilokhwe zomtshato 2016
iisuti ezimiselweyo zomtshato
uyenza njani isaphetha ngeribhoni
iindawo zokurenta tuxedos kufutshane nam